Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpivaro-gazety mandehandeha: Kendain’ny « Att » ny fahalalahany
Mpivaro-gazety mandehandeha: Kendain’ny « Att » ny fahalalahany
Maneran-tany dia manana fahalalahana hivarotra gazety aùmin’ny toerana rehetra ny misahana izany mandehandeha na “crieurs”. Hatrany anatin’ny birao fiasana any no ahitana azy ireny, any anivon’ny orin’asa isan-tokony any. Eken’ny soatoavina maneran-tany izany. Ny eny an-dalambe moa dia tsy tenenina intsony.
Tsy mba fantatry ny tompon’andraikitra eo anivon’ny ministeran’ny Fitaterana amin’ny alalan’ny “Agence de transports terrestres” na “Att” ve izany? Manitikitika ny saina io satria voarara tsy mahazo mivarotra gazety ao anatin’ilay toby vaovao fiantsonan’ny fiara fitaterana eny Andohatapenaka ny mpivaro-gazety mandehandeha. Nahoana loatra no kendaina ho tsy maintsy eny ivelan’ny toby izy ireo no mivarotra. Tsy mitovy amin’ny mpivarotra mofogasy sy glasy mbamin’ny “composé” ange ny mpivaro-gazety e!
Na ireo mpamily na ny mpandeha fiara fitaterana eny dia mangetaheta hahita vaovao amin’ny alalan’ny gazety nefa dia tsy afaka misitraka izany izy ireo noho ny afitsoky ny mpitantana io toby fiantsonan’ny fiara io, izay eo ambany vahohon’ny fanjakana amin’ny alalan’ny “Att”.
Sao mba tokony mamantatra ny zava-misy maneran-tany ihany ny tompon’andraikitra eto amintsika fa mahamenatra ny tsy manao ny fanaon’ny olona e!